Ereyga Cholera (Daacuun) ha u isticmaalin Shuban ka (Diarrhea). | Haqabtire News
Ereyga Cholera (Daacuun) ha u isticmaalin Shuban ka (Diarrhea).
Shuban ka iyo Daacuun ku waa laba xanuun oo kala duwan oo kale madax banaan. Wax walbana waxay ku fiican tahay inay ka hadlan dadka ehelka u ah ama meel uun kasoo gala arinka laga hadlayo. Isticmaalka ereyga Cholera waa mid galin karta dad, magaalo, waddan iyo qaaradba go doon iyo isu socod la’aan. Waxaad og tahay meesha ama goobta wuu ka dilaaco cudurka daacuunku inaan lagalin lagana bixin. Bulshada Burco ku dhaqan xanuunka haleeyey waa shuban biyood ay sababeen Abaartii darnayd iyo Roobab kii ka dambeeyey.
Alle haka dulqaado. Qoraal kooban aynu ku eegno labadan xanuun ee dad badan isku khaldayaan ama ay isweydaarinayaan magacyadooda. Shuban biyood iyo Daacuun Labada xanuunba waxa ay ka mid yihiin xanuunada faafa. Waxa sababa noolayaal illi maqabatay ah kuwaas oo laysugu gudbin karo ama u gudbi kara si fudud. Noolaha illi ma qabatayda ah waxa kamida BACTARIA, VIRSUSES, FUNGI.
Inta badan waxay xanuunadani ku badan yihiin caruurta, waxaana ay sababaan dhimasho Inta aynaan is berber dhigin labadan xanuun bal horta mid walba aan is yar dul taagno. 1- Shuban biyood (Diarrhea) Shuban biyood ku waa in 24 kii saacadood ba 3 jeer ama ka badan aad saxarootid saxaro jilicsan sida biyaha oo kale. Xanuun kani inta badan waxa uu dhacaa ama dilaacaa wakhtiyada xili roobaadka.
Shuban biyood ka inta badan waxa uu ku gudbaa afka oo laga qaato biyo ama cunto wasakhaysan. Waxyaabaha saacida in xanuunkan shuban biyood ku dilaaco ama qof saameeyo waxa kamida: 1-Difaaca qof ka oo hooseeya 2-Xaalad nadaafad daro 3-Cabid amd cunid biyo iyo Cunto wasakhaysan 4-Nafaqo daro 5-Heer ka aqoonta Shuban biyood ku qof ka waxa uu ku keena fuuq bax amd in biyo badan jidhkiisa ka baxaan, taas oo iyana sababta in:
1-Maqaarku lumiyo awoodi uu ku kala baxayey
2-Wadna garaacu hoos u dhaco
7-Miisaanki oo luma
8-Neefsasho dheer/dirqi ah
1- Daacuun caloolaad (Cholera) Daacuun ku waa shuban kadis ah laakiin Daacuunka waxa sababa oo kaliya hal noole loo yaqaano ama la dhaho “Vibrio Cholera”. Waxa uu ku gudbaa Daacuunku biyaha iyo cuntada aan nadiifta ahayn. Wakhtiga uu noolaha sababa Daacuun ka jidhkaaga galo iyo wakhtiga uu qof ku isku arki karo astaamaha xanuunka waxay noqon kartaa 4 ilaa 6 saacadood, waanay ka badan kartaa xaaladaha qaar. Astaanta u gaar ka ah Daacuunku waa Shuban kadis ah, badan, soo noqnoqda, bilaa xanuun ah oo biyo oo kala. Kala duwanaanshaha Labadan xanuun waa sidan: 1-Daacuun: Shuban, dhaqdhaqaaq ay sameeyaan hunhuriga, caloosha iyo midhicirada iyo Matag daran ayaa lagu arkaa bukaanka Daacuunku hayo.
2-Shuban biyood: Saxaro jilicsan/biyo oo kale ah badan oo soo noqnoqonaysa ayaa lagu arkaa bukaan ka qaba shuban biyoodka.
1-Shuban biyoodka waxa sababi kara Bacteria, Virus iyo parasites (dulin sida gooryaan). waxa kale oo sababi kara qofka oo cuna waxyaabo kimikalis ah, cunto xumaatay (baariday), is badel ku yimaada cuntadii calooshu la qabsatay taaso ay keento u safrid magaalo kale.
2-Daacuunka waxa sababa oo kaliya noole ilmaqabatay ah oo la dhaho Bacteria waliba nooceeda lasii dhaho Vibrio Cholera.
Sidee u gudbaan:
1-Shuban biyoodku waxa uu ku gudbaa biyo ama cunto aan nadiif ahayn.
2-Daacuunku waxa uu ku gudbaa cunto iyo biyo wasakhawday iyo taabasho toos ah oo saxaro ama matag.
1-Shuban biyoodka waxa lagula tacaala karantiimayn iyo in lasiiyo bukaanka dareere ama milan fuuq bax celin ah. 2-Daacuunka karantiimayn iyo fuuq bax celin waxa dheer dawooyin ka lagula dagaalamo Bacteria yada sida ciprofloxacin iyo tetracycline.
Ka hor tagooda:
1-Shuban biyoodku talaal ma leh laakiin waxa lagula tacaala nadaafada oo sare loo qaado.
2-Daacuunku waxa uu leeyahay talaal ka hor tag ah.
Ugu dambayn Alle (swt) ha ka dul qaado xanuunada bulshada Burco iyo guud ahaan Somaliland inta bukta, inta ladan Alle haka hayo, inta aanu gaadhina Alle ma tuso, intii ku baxday Alle ha u naxariisto. Aaamiiin. Wacyi galinta iyo Fayo dhawrka aynu joogteyno.
Mubarik Haji Maxamuud